I-AfricArXiv ngamafuphi - esikwenzayo, impumelelo yethu kanye nohlaka lwethu lomgwaqo - i-AfricArXiv
Kushicilelwe ngu I-AfricArXiv on I-XNUMi-Okthoba i-13 I-XNUMi-Okthoba i-13
Sekuphele iminyaka engaphezu kwemibili sisebenze ne-AfricArXiv siyajabula ukwethula ukubuka konke ngomsebenzi wethu. Uthola eminye imininingwane nolwazi ku-
Caphuna njengo: Ahinon, JS, Ksibi, N., Havemann, J. et al. (2020, Septhemba 25). I-AfricArXiv - i-pan-African Open Scholarly Repository.
Njengabasayini be- IHelsinki Initiative on Multilingualism, lo ISan Francisco Isimemezelo Ngokuhlola Ucwaningo (sfDORA), i- Isinyathelo seC19 Rapid Peer Review futhi Izimiso Zokutholakala Okuvulekile zase-Afrika Kwezokuxhumana Ngezazi sigqugquzela ukwehluka kolimi, ukucwaninga ubuqotho kanye nokwenza izinto obala ekushicileleni kwezazi zase-Afrika.
Kungani sidinga indawo yokugcina izifundiswa ye-Afrika?
Umbono nenhloso ye-AfricArXiv ifaka phakathi ukukhuthaza umphakathi phakathi kwabaphenyi base-Afrika, ukwenza lula ukusebenzisana phakathi kwabaphenyi base-Afrika nabangewona ama-Afrika, futhi kuphakanyiswe nephrofayili yocwaningo lwase-Afrika ezingeni lomhlaba jikelele.
Senza ucwaningo lwase-Afrika lubonakale emhlabeni wonke, ngaleyo ndlela sandise ukusebenzisana kulo lonke izwekazi kanye nokuvusa ucwaningo imikhakha eyahlukene. Lokhu kufezwa ngu ukusebenzisana nezinhlangano ezisunguliwe nezaziwayo ngaphakathi nangaphandle kwe-Afrika egxile kwezokuxhumana kwezesayensi, ukwakha amakhono, ukuthuthukiswa kobuchwepheshe babafundi kanye nokuxhumana - konke lokhu kusebenza ukutholakala kwemiphumela yocwaningo lwase-Afrika nempumelelo kanye nokwakhiwa kwedumela lamaphrofayli abacwaningi base-Afrika.
Impumelelo yethu kuze kube manje
Ngo-Ephreli 2018, imbewu ye-AfricArXiv yatshalwa ngesikhathi somhlangano wesibili we-AfricaOSH eKumasi, eGhana ngalo mlando Tweet:
Isidingo sokuba nendawo yokugcina ulwazi yase-Afrika yalo lonke ulwazi nezinhlelo zesayensi evulekile #AfricaOSH pic.twitter.com/VNAemghv6e
- UJoe (@JooGraced) April 14, 2018
NgoJuni ngawo lowo nyaka, sihlanganyele ne-The Center for Open Science futhi sethula i- insizakalo yangaphambi kokushicilelwa. Ekuqaleni kuka-2020 sandise ipulatifomu yethu yokufinyelela okuvulekile ku-a umphakathi
iqoqo kuZenodo futhi waqala ubambiswano no IsayensiOpen, esisebenza naye Imidwebo ye-AfricArXiv nokunakekela iqoqo le- Ucwaningo lwe-COVID-19 oluvela nase-Afrika.
Ngokushesha ngemuva kwalokho futhi njengempendulo entsha futhi esheshayo kulo bhubhane, sabambisana Iqembu Lolwazi lekusasa ukuhlinzeka ngeplatifomu ye- izigxivizo zomsindo / ezibonakalayo ku-PubPub. Okulandelayo, sihlela ukungeza I-Figube futhi I-PKP / OPS ohlwini lwezinqolobane zethu zozakwethu.
Njengoba sisebenza ukukhuthaza umphakathi phakathi kwabacwaningi base-Afrika, sasijabule ngokwethula isicelo ngo-2019 sokusayina Izimiso zase-Afrika Zokufinyelela Okuvulekile Kokuxhumana Kwabafundi https://info.africarxiv.org/african-oa-principles/. Isikhalazo siyaqhubeka, ngakho-ke usengangeza igama lakho kuso. Ishicilelwe ngaphansi kwelayisense le-CC-BY, noma ngubani angabelana futhi aguqule imigomo ngenkathi enikeza isikweletu esifanele 'Izimiso zase-Afrika Zokufinyelela Okuvulekile Ekuxhumanisaneni Kwezemfundo njengoba kuvunyelwene ngabasayinayo', nikeza isixhumanisi semigomo, futhi ukhombise uma kwenziwe izinguquko.
Simemezele ukusebenzisana kwethu namasu Isikhungo Sokucwaninga Komhlaba Okusakazwa Emhlabeni jikelele (IGDORE), Vula Imephu Yolwazi futhi IsayensiOpen. I-ORCID ne-AfricArXiv ziqale imizamo ngokuhlanganyela ukuze siza ososayensi base-Afrika ekuqhubekiseleni phambili imisebenzi yabo ngokusebenzisa izihlonzi ezihlukile.
Kusukela kwaqala ubhadane ngo-Mashi, siqoqa, sakha futhi sisakaze ingcebo ye izinsizakusebenza, imibono kanye nemihlahlandlela ezungeze i-COVID-19 e-Afrika.
Sithole futhi samukela izethulo ezizungeze ama-200 sezizonke kumakhosombe ethu ozakwethu.
Umgwaqo womgwaqo 2021-2023
Ngokwakhiwa kwengqalasizinda yokutholakala evulekile, esobala, ethembekile, esebenza kahle futhi esezingeni eliphansi, kuyinjongo yethu ukuxhasa ukuxhumana kwabafundi base-Afrika kanye nemfundaze yase-Afrika - kuzithameli ezibanzi. Njengengxenye yezinhlelo zesikhathi esizayo esiseduze, sihlose ukuqhubekisa ukwehlukanisa amathuluzi kanye nezicelo ukuze sisebenzisane namazinga nezindlela ezintsha ezisetshenziswayo emhlabeni wonke ukufeza inhloso yethu yokuqinisekisa ubunikazi base-Afrika bemininingwane yase-Afrika. Eminyakeni emithathu ezayo, sifuna ukuqhubeka nokwandisa ukuxhumana kanye nokwakha ubambiswano ohlelweni lwezemvelo olukhulayo lwe-African Open Science futhi sisungule i-AfricArXiv njengesikhulumi esizimele, esizwenqabela amazwekazi esabelwe i-Open Access. Sibheka izinqolobane zezifundiswa ezahlukahlukene ezisingatha okuqukethwe kwe-Afrika ukuthi zisebenzisane futhi zisebenzisane nababambiqhaza abahlukahlukene ekufinyeleleni kuleyo nhloso. Umgwaqo ogcwele ungatholakala ku- africarxiv.org/roadmap.
Nikela, uxhase futhi uhlanganyele
Ukwakha nokuphatha i-AfricArXiv kubandakanya izindleko zemithombo yabantu, ukuthuthukiswa kobuchwepheshe, izinsizakalo zozakwethu, izinsizakalo ezivela eceleni ezifana nokusingathwa kwewebhu, izimali zamathuluzi wokuxhumana kwidijithali njll. Ukusuka ku-2018 kuya ku-2020, lezi zindleko zanikezwa yiminikelo eqondile yezimali ikakhulukazi ngamalungu eqembu eliyisisekelo, ukubamba iqhaza kwenkomfa nokuyekelwa kwemali ekhokhelwa insizakalo yozakwethu kanye nabasebenzi abazinikele kakhulu beqembu elibanzi nabasebenzisi be-AfricArxiv.
Sisebenzela ukugcina izethulo zingabizi kakhulu kubaphenyi abangabodwana futhi yingakho sidinga ukwesekwa.
Imithombo yethu yemali engenayo ehleliwe ifaka phakathi ukusebenzisana kwezikhungo, ukuxhaswa kwabantu abaningi, ukuqeqeshwa, izinsizakalo zokubonisana nokwakhiwa kwamakhono
Iminikelo yezezimali kwi-AfricArXiv ingenziwa nge-PayPal, mPesa, ukudonswa kwemali ngqo, nokudluliselwa online. Ngemininingwane, bheka https://info.africarxiv.org/contribute/.
Iminikelo eku-inthanethi ingafakwa ku- https://opencollective.com/africarxiv ngekhadi lesikweletu noma ngokudluliswa kwebhange: iminikelo ye-incognito nayo ingenzeka.
Categories:	izimemezeloVula UkufinyelelaUmbiko
Tags: I-AfricanResearchIzikhundla Zedijithaliukufinyelela okuvulekilevula isayensiUmgwaqo wendlela
Abalingani be-AfricArXiv ne-COS ukusekela ucwaningo lwe-pan-Afrika - i-AfricArXiv	· 22nd Okthoba 2020 ngo-8: 51 pm
[…] Kule nyanga, i-AfricArXiv ifingqe impumelelo kanye nomhlahlandlela weminyaka eyi-1-3 ezayo. Ungasekela futhi wakhe maqondana nokusimama kwayo nge- […]